Chautari Daily » शालिकरामलाई सम्झदै रविले भने–‘साहसी र आत्मविश्वास भएको सञ्चारकर्मी थिए’
स्तब्ध छु आज । यस कार्यक्रमका लागि अहोरात्र खट्ने कार्यक्रमको यो उचाइमा सहयात्री बनेका एक होनहार पत्रकार शालिकराम पुडासैनी चितवन, नारायणघाटको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृ..त फेला परेका छन् । आफ्नो एक निकट पूर्व सहकर्मीको मृ..त्युको खबर पढ्न कति कठिन हुन्छ ।
त्यो म यतिखेर महशुस गर्दैछु । हुन त मानिसको मृत्युपछि उसको महिमा गाउने चलन छ, तर शालिकराम पुडासैनीका रिपोर्टमा हामीले गरेका कुराहरु कार्यक्रमको आर्काइभमा पूर्ण सुरक्षित छन् । सबैभन्दा जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ र स्टिङ अपरेशनका लागि सबै भन्दा अग्रपंतिमा उभिएर म गर्छु भन्ने साहस, आँट र आत्मविश्वास भएको सञ्चारकर्मी थिए सालिकराम ।
करिब २ महिना अघि आँफूले नयाँ अवसर प्राप्त गरेँ भनेर हाम्रो टिमबाट विदा लिएर गएका सालिकराम यसरी संसारबाटै विदा लिन्छन् भन्ने कल्पनासम्म पनि थिएन । यसै स्टुडियो, यही कोठा चोटामा हस्याङफस्याङ गरेको सालिकरामको झझल्कोले हाम्रो टिमलाई कहिलेसम्म मर्माहत पार्ने हो थाहा छैन ।
तर, प्रिय साथी तिम्रो शाहस, आँट र आत्मविश्वास यो कार्यक्रमको अस्तित्व रहेसम्म जीवित रहन्छ । केही सिकेर, जानेर पाएको अवसर छोडेर यतै बस भन्न सकेको भए सायद यो दिन आउदैन थियो कि ! तर, उन्नति र प्रगति गर्ने अवसर पाएका साथीलाई खुम्च्याएर राख्ने अ.पराध गर्न सकिएन ।
हाम्रो टिम छोडेर अर्को टिममा गइसकेका पूर्व सहकर्मी भनेर यो मन के मान्थ्यो । अकल्पनीय घटनाले मर्माहत बनाइनै रहेको छ । हामी एउटा संस्था, एउटा संचारगृहलाई मात्र योगदान दिन काम गरिरहेका थिएनौं, होइनौं । हामी त यो सिंगो समाजलाई योगदान दिन काम गरिरहेका संचारकर्मी हौं ।
त्यसैले पनि फैलिएर हाम्रो टिमको सदस्य अर्को संचारगृहमा अझै राम्रो अवसर प्राप्त गरेर जाँदा यो समाज अझै लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै हामीले आफ्नो एक ज्यादै महत्वपूर्ण सदस्यको विदाई भारी मनले गरेका थियौ तर, २ महिनापनि नवित्दै समाचार लिएर आउने साथी आँफै समाचारको शिर्षक बने । र, यो स्टुडियोमा यसरी उभिएर आफ्नै पूर्व सहकर्मीको मृ.त्युको खबर सुनाउनु पर्ने दुर्भाग्य मेरो भागमा प¥यो । आज विहान चितवनका टिभी जर्नलिष्टलाई आफ्नै पूर्व सदस्यको मृ.त्यु शंकास्पद भएकाले गएर फलोअप गर्नु भनि अह्राउँदाको अनुभव ज्यादै गरुङ्ह्रो छ ।
घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । परिवारको सदस्यसँग प्रत्येक क्षण संवादमा छौं । प्रहरी प्रशासनबाट मिनेट–मिनेटको अपडेट लिइरहेका छौं । प्रिय सालिकराम ! कुनै पशुले यो कुकृत्य गरेको रहेछ, भने त्यसलाई पत्ता नलागाएसम्म चैन लिने छैन ।
मध्यरातमा प्रहरीको लात्ति, ठग, गुण्डाको ध.म्कीसँग रत्तिभर नडराएका मान्छेले आ.त्मह..त्या ग¥यो होला भन्ने मान्न यो मनले कसरी सक्ला र ? यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि तिमीलाई आत्महत्या गर्न विवश पार्ने, घटना, व्यक्ति वा परिस्थितिबारे खबर लिएरै छाड्छौं ।
हर जोखिमलाई स्विकार गरेर जुनसुकै विषयमा पनि रिर्पोटिङका लागि तयार रहने योद्धा जस्तो टिभी जर्नलिष्ट नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताले सायदै पाउला । आफ्ना ५० औं रिपोर्टहरुले यो समाजलाई दिएको योगदानले सालिकराम पुडासैनीलाई सँधै जिवित बनाइराख्ने छ ।
यी क्षणहरु हामी कहिल्यै भुल्ने छैनौं । बाटो त सबैको त्यही हो तर तिमीले हतार ग¥यौ साथी । अझैं कयौं कालोबजारीहरुको फर्दाफास गर्न बाँकी नै थियो । घुसखोरहरुको स्टिङ अपरेशन गर्नु नै थियो । ठग दलालहरुलाई नङग्याउन बाँकी नै थियो । तिमीले छोडेर गएका अधुरा रिपोर्टहरुको लिस्ट अझै सुरक्षित छन् ।
तिनको फलोअप हामी गरेरै छाड्नेछौं । सँधै जस्तो आज पनि चर्को आवाजमा भन्न मन छ कि दर्शकहरु, अब हेर्नुहोस् टिभी जर्नलिष्ट सालिकराम पुडासैनीले तयार पारेको यो विशेष रिर्पोट ! तर, अब त्यस्तो हुन नसक्ने भएको छ । तर पनि भनिन्छ, दुनिया त निरन्तर चल्नै पर्छ, न्युज २४ टेलिभिजनको स्लोगन नै छ, ‘हामी निरन्तर न्युजमा छौं ।’ आज पनि अर्को एपिसोड प्रस्तुत गर्नैपर्छ ।
प्रकाशित मिति २१ श्रावण २०७६, मंगलवार १५:४६